दक्षिण कोरियाको खनिज स्पाले साइकिल चालकहरूलाई भ्रमण गरे पछि एक दिन पछि
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » समाचार » दक्षिण कोरियाको खनिज स्पाले साइकिल चालकहरूलाई भ्रमण गरे पछि एक दिन पछि
कोरिया पर्यटन org_1
के पछि के राम्रो हुन्छ लामो बाइक सवारी वा लामो, तातो नुहाउने भन्दा पैदल यात्राको दिन? धेरै छैन ... सायद मसाज?
के पछि के राम्रो हुन्छ लामो बाइक सवारी वा लामो, तातो नुहाउने भन्दा पैदल यात्राको दिन? धेरै छैन ... सायद मसाज? ठीक छ, यो बाहिर जान्छ कि तपाईं कोरियाको तातो वसन्त रिसोर्ट्स भ्रमण गर्दा पश्चिममा कस्तो लाग्ने छ भन्ने अंशको लागि विस्मयकारी ढंगले आराम पाउन सक्नुहुन्छ। यी विशेष ठाउँहरू उही ज्वालामुखी क्रियाकलापको परिणाम हो जसले कोरियालाई यसको हिमाली स्थलाकृति दिए। चिन्ता नलिनुहोस्, यद्यपि the प्रायद्वीपमा कुनै सक्रिय ज्वालामुखी छैन।
समान सजिलै पश्चिमी रिसोर्टको विशिष्ट लागतको एक अंशमा रहेका मूल्यहरुमा, सियोल र पुसन जस्ता रमाईलो शहरी परिदृश्यहरूको पागल भीडबाट तपाईं यसलाई सजीलो रूपमा लिन सक्नुहुनेछ।
तपाइँ नयाँ दृश्यहरू र ध्वनिहरूको संवेदी अनुभवको लागि छुट्टिमा नयाँ ठाउँमा जानुहुन्छ, र योजनाबद्ध संस्कृति सदमेको एक प्रकार जुन तपाइँको क्षितिजको विस्तार गर्दछ। त्यो केहि दिनको अवधिमा लिनको लागि धेरै छ! आराम गर्न र यो सबै प्रक्रिया गर्न अलि समयको साथ के गलत छ?
कोरियाका धेरै पर्यटकहरूले आराम र विश्राम पाउने सम्भावनालाई झन्झटिलो पार्ने जस्तो देखिन्छ जस्तो कि उत्कृष्ट मनोरम दृश्यहरू खोज्न वा स muse्ग्रहालयमा राष्ट्रिय खजाना हेर्ने जत्तिकै। यस्तो देखिन्छ, कोरियाको धेरै स्पामा आराम गरेर, तपाईं पनि कोरियाली सांस्कृतिक गतिविधिमा भाग लिइरहनुभएको छ! तपाईले स्थानीयले सयौं बर्षे गरेको तरीकाले भिजाँदा सम्पन्न र पुन: जीवन्त महसुस गर्नुहोस्। तपाईंको मानसिक र दन्त स्वास्थ्य पनि खनिज पानीबाट लाभान्वित हुन सक्छ, किनकि उनीहरूलाई पिउँदा दाँतको क्षय कम हुन्छ भनिन्छ। जिओला डो प्रान्तको स्पाले रक्तसंचार सुधार गर्ने, बच्चा जन्माउने समय वरिपरिको महिलाको स्वास्थ्यलाई बढवा दिने, र पक्कै पनि मांसपेशिहरु र कंकाल सम्बन्धी समस्याहरूलाई शान्त पार्न भनिन्छ।
कोरियाको स्पा व्यक्तित्वमा नै विविध हुन्छन् जसरी कोरियालीहरू आफैंमा हुन्छन् - तपाईंले स्पा पाउन सक्नुहुन्छ जुन खानामा केन्द्रित छ, वाटरपार्क्सले स्लाइडको साथ तातो पोखरी जोडी दिन्छ जहाँ तपाईंको बच्चाहरूले "कावाबुंगा" भन्न सक्दछन्। र तपाईंको फेन्सी अनुरूप कुनै पनि इनडोर र आउटडोर अनुभवहरूको संयोजन।